Badminton – «Mada jeune 2018»: nisongadina i Edino, mpilalaon’ny St Michel Itaosy - ewa.mg
Badminton – «Mada jeune 2018»: nisongadina i Edino, mpilalaon’ny St Michel Itaosy
News - Sport - Badminton – «Mada jeune 2018»: nisongadina i Edino, mpilalaon’ny St Michel Itaosy
Notanterahina, omaly alahady, tetsy amin’ny efitrano kelin’ny lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina, ny asabotsy 17 sy omaly alahady 18 novambra, lasa teo ny fifaninanam-pirenena, sokaky zandriny (U9 ; U1 ; U13 . U15 ; U17), lahy sy vavy, taranja badminton.
Tsara ny vokatra tamin’ny ankapobeny, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, sokajy zandriny, taranja badminton. Niakatra ny lentan’ny fifaninanana, araka ny nambaran’ireo teknisianina. Tafita tany amin’ireo ankizy ny fiofanana, norantovin’ireo mpanazatra.
Anisan’ny nahitana izany, ny teo amin’ny U11 lehilahy, nifanandrinan’i Mahefa sy i Loane. Nifanenjehana hatramin’ny farany mantsy ny isa ary nifanakaiky hatrany, mandra-pahatapitry ny seta, nilalaovana. Torak’izany koa ny teo amin’ny U17 vehivavy, nihaonan’i Ariela sy i Malala, samy mpilalaon’ny Baobad , Nisaraka tamin’ny seta, 2 no ho 1, ny lalaon’izy mirahavavy. Na izany aza, nisongadina ny klioba SCI Itaosy sy ny VTTK Ivato ary ny Baobad. Izy ireo izay samy nandrombaka medaly volamena roa avy. Nahatratra, 33 mianadahy ireo mpilalao niatrika ity fifaninanana ity, avy amin’ny klioba 6 dia ny Sangasy, ny Baobad, ny Lycée St Michel Itaosy, ny SCI Itaosy, ny St Joseph Mahamasina, ary ny VTTK Ivato.
Dingana manaraka ho an’ny federasiona malagasin’ny badminton, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, sokajy «série A ; B ; C» sy ny an’ny «véteran». Fihaonana, hotanterahina ny 8 sy ny 9 desambra 2018. Fifaninanana, hitiliana ireo izay handrafitra mialoha ny ekipam-pirenena, eo amin’ny fiatrehana ny lalaon’ny Nosy 2019. Mandra-piandry izany, toy izao ireo voka-dalao.
Ireo voka-dalao rehetra :
-U9 vehivavy : Roy (SCI) – Rado (SCI) – (21 /17 ; 21/9)
-U11 vehivavy : Mégane (VTTK) – Nancy (SCI) – (21/17 ; 21/4)
-U11 lehilahy : Mahefa (SCI) – Loane (Sangasy) – (21/16 ; 26/24)
-U13 vehivavy : Alicia (Baobad) – Ny Harena (SCI) – (21/3 . 21/11)
-U15 lehilahy : Fidelis (VTTK) – Logane (Sangasy) – (21/15 . 21/15)
-U17 vehivavy : Ariela (Baobad) – Malala (Baobad) – (18/21 ; 23/21 ; 26/24)
-U17 lehilahy : Edino (St Michel Itaosy) – Fabio (Baobad) – (21/14 ; 21/16)
Nivoaka tamin'ny : 19/11/2018
Cnaps: olona very asa 849 nahavita fiofanana
Miisa 849 ireo mpiofana nomen’ny Tahirim-pirenena misahana ny fiahiana sosialy (CNaPS) mari-piofanana, omaly. Olona very asa izy ireo, satria voatery natsahatry ny mpampiasa vokatry ny tranga Covid-19.Nandray andraikitra ny CNaPS, miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka samihafa (CCIFM, INPF, MPE, CDA, Eccova, Ipac), hamerina ireo mpiasa very asa eo amin’ny sehatry ny asa indray. Nitotaly 849 ny mpiofana, nanomboka ny fiandohan’ny taona 2021.Nizara andiany roa ny fiofanana. Voalohy, nofantarina ny traikefa ananan’ny tsirairay, nampianarina ny fomba fandrafetana taratasy CV sy ny fomba hiatrehana ny fanontaniana rehefa hitady asa. Famantarana ny seha-pihariana hatao aorian’ny fiofanana. Faharoa, miompana amin’ny tena fiofanana arakaraka ny lalam-pihariana nosafidin’ny tsirairay. Misy ny fampianarana teny vahiny frantsay sy/na anglisy, ny informatika, ny asa birao (secrétariat), sns. Eo koa ny asa tena, toy ny fanaovana mofomamy, ny lakozia, ny zaitra sy ny fikirakirana ny milina fanjairana indostrialy, ny fanamboarana fiarakodia, ary hisy koa ny familiana fiarakodia.2.000 isaky ny telo volana ireo very asaNilaza ny talen’ny Tosika sy ny fanentanana ara-tsosialy CNaPS, Rakotomalala Yvan, fa nahita asa vaovao ny 40%-n’ireo efa nomena fiofanana toy izao. Manentana ny hafa izy ireo, hanatona ny CNaPS, satria manodidina ny 2.000 isaky ny telo volana ny olona very asa amin’izao krizy Covid-19 izao. Efa maherin’ny 200 ireo nanao fangatahana fiofanana indray. Midika ireo fa mbola maro ny orinasa tsy miverina amin’ny laoniny sady sahirana ka voatery manala mpiasa.Njaka AndriantefiarinesyL’article Cnaps: olona very asa 849 nahavita fiofanana a été récupéré chez Newsmada.
Mitombo isa hatrany ny mpanoratra: Itangoronan’ny tanora ny tononkalo
Na vao tamin’ny vanim-potoana nanjakan-dRadama II aza ny nametrahana ny fototra ijoroan’ny soratra malagasy, anisan’ny firenena manana mpanoratra maro indrindra aty Afrika i Madagasikara, ankehitriny. Ny ankamaroan’izy ireny, anefa, miompana amin’ny fanoratana tononkalo. Vitsy ihany ireo mirotsaka amin’ny fanoratana tantara foronina. “Anisan’ny antony mahatonga izany ny fotoana. Mitaky fotoana maharitra kokoa ny tantara foronina”, hoy i Eric Ravalisoa, mpanoratra. “Raha hamorona tantara heverina fa niseho tany Toamasina ianao, mila mahita sy mahafantatra tsara an’i Toamasina. Raha ahitana haiady ny tantara foronina, mila mahay na mahafantatra momba izany ny mpanoratra… Mitaky fotoana maharitra ny fanaovana izany rehetra izany”, hoy hatrany izy. Ny tranga tahaka izany no nambaran’ity mpanoratra manana ny maha izy azy ity fa anisan’ny mampitodika bebe kokoa ny tanora any amin’ny fanoratana tononkalo.Ho azy, tontolo iray mila fanetsiketsehana sy fanairana ny fanoratana tantara foronina. Ankoatra ny fiofanana tokony homena izay liana sy manan-talenta amin’ny tantara foronina, ilaina koa ny fanatanterahana karazana fifaninanana. Sady famohazana talenta izy ireny no mitondra vitrika ho an’ny mpanoratra.HaRy RazafindrakotoL’article Mitombo isa hatrany ny mpanoratra: Itangoronan’ny tanora ny tononkalo a été récupéré chez Newsmada.
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 7 décembre 2020 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 7 décembre 2020 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo : » Aucune leçon à recevoir de Marc Ravalomanana «
» Une insulte au peuple malgache « . C’est ainsi que la ministre de la Communication et de la Culture, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo qualifie les descentes au niveau des marchés de Tana effectuées en ce moment par l’ancien président Marc Ravalomanana. » Il s’agit d’une manipulation politique pure et simple « , estime-t-elle. En effet, tout en dénonçant un » calcul politique visant à déstabiliser le pays « , la MCC se dit consternée par le fait que l’ex-président ne fasse aucun geste pour venir en aide à la population en cette période de pandémie. « Durant ces descentes, il n’apporte même pas de masques à distribuer à la population « , a-t-elle fait remarquer. Selon Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, » quelqu’un qui ne fait rien mais qui passe son temps à se prendre en photos pendant quelques minutes dans les marchés pour attirer l’attention ne peut pas s’ériger en donneur de leçons « . » Vous êtes à l’écoute de la population en multipliant les déplacements dans la brousse et dans les zones reculées, vous n’avez aucune leçon à recevoir de cette personne « , a-t-elle conseillé en s’adressant à l’actuel homme fort du pays. Continuant sur sa lancée, Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo de déclarer que » c’est aberrant de croire que quelqu’un qui a dirigé le pays pendant sept ans et qui n’a fait que s’enrichir et détruire les opérateurs concurrents affirme désormais disposer des solutions pour sauver le peuple malgache « . La ministre de la Communication décide de sortir ses griffes et riposte aux interventions de Marc Ravalomanana, qui multiplie les interventions médiatiques. En tout cas, à l’allure où vont les choses, l’on s’achemine vers un mois de juin tendu sur le plan politique. Davis R L’article Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo : » Aucune leçon à recevoir de Marc Ravalomanana « est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo : » Aucune leçon à recevoir de Marc Ravalomanana « a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Fifandonana tamin’ny dahalo: zandary efatra naratra, olona telo ny namoy ny ainy
Hatramin’ny niandohan’ny taona, miisa efatra ireo zandary naratra tamin’ny fifandonana tamin’ireo dahalo. Isan’izany ny zandary iray miasa ao Analankininina Malaimbandy, faritra Menabe. Nanafika tao Manandaza Malaimbandy ireo olon-dratsy, afakomaly hariva, ka voatifitra teo amin’ny tratrany ilay zandary. Vokany, nalefa vonjimaika tamin’ny angidimby eto an-dRenivohitra izy omaly. Manohy ny fitsaboana eny amin’ny Hopitaly miaramila ity farany ankehitriny. Vokany, nitsena ilay naratra teny Betongolo ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ny Jly Ravalomanana Richard. Nanotrona azy teny an-toerana koa ny Jly lefitra faharoa kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena. Fantatra ankehitriny fa miisa telo ireo zandary maty namoy ny ainy tamin’ny fifandonana tamin’ireo dahalo. Tranga fahefatra kosa ho an’ilay naratra teo am-panatanterahana ny asany tao Manandaza io. Miandrandra fiaraha-miasa amin’ny vahoaka hatrany ny zandary amin’ny fanomezan-baovao ireo mpitandro filaminana. Hetsika hatao hamongorana ireo mpanao ratsy sy ho fiarovana ny ain’ny mponina. Henintsoa HaniL’article Fifandonana tamin’ny dahalo: zandary efatra naratra, olona telo ny namoy ny ainy a été récupéré chez Newsmada.
Fifampiarahabana taom-baovao: nandrangaranga ny hihetsika amin’izay ny mpanohitra
« Nahavita ezaka lehibe isika satria afaka nampivondrona ny hery sy ny fomba fijery ho an’ny mpanohitra tamin’iny 2020 iny. Ho hitantsika ny tohiny », hoy ny filoha nasionalin’ny Tim, Ravalomanana Marc, teny Faravohitra ny faran’ny herinandro teo. Nifampiarahaba sy nifampirary soa tamin’izany izy ireo sy ny avy amin’ny fanoherana. Nohitsiny fa nisy ny sakantsakana sy ny fampitahorana ary indrindra ny fahasahiana managadra. Nilaza ny tsy hihemotra anefa izy ireo. « Miantso ny rehetra hamondrona hery hananganana ity firenena ity izahay. Tonga ny fotoana hitsanganana hanavotana ny firenena latsaka an-katerena, ary vonona ny amin’izany aho…”, hoy ihany izy. Nanteriny fa nihemotra ny firenena ary efa manakaiky ny farany. Be loatra ny fitaka sy ny fampanantenana poakaty, ny tsy fahaiza-mitantana, araka ny nambarany. “Tsy maintsy vakina bantsilana izany”, hoy ihany izy.Tsiahivina fa niatrika izany ankoatra ireo mpikatroka Tim ireo avy amin’ny RMDM sy ny olon-tsotra ary ireo fikambanana sy antoko politika hafa.Synèse R.L’article Fifampiarahabana taom-baovao: nandrangaranga ny hihetsika amin’izay ny mpanohitra a été récupéré chez Newsmada.
Fandraisana mpiasam-panjakana: 1 300 ireo mpampianatra nivoaka tamin’ny ivontoeram-panofanana
Hiroso amin’ny fandraisana ny antontan-taratasy hidirana ho mpiasam-panjakana ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena aorian’ny fanatontosana ny fanadinam-panjakana BEPC, aorian’ny 12 septambra ho avy izao, hoy ny minisitra tompon’andraikitra. Ho laharam-pahamehana aloha amin’ny fandraisana ireo mpampianatra niofana tamin’ny ivontoerana manokana ho mpampianatra sy ireo nivoaka avy amin’ny Ecole normale supérieure. Mahatratra 1300 eo ho eo izy ireo manerana ny Nosy raha 8 000 ny isan’ny mpampianatra horaisina isan-taona hanampy isa ireo efa am-perinasa. Hotsinjaraina isaky ny Cisco ny ambiny ka hojerena ireo sekoly tsy mbola manana mpiasam-panjakana mihitsy.Mampahatsiahy ny minisitra fa tsy andoavam-bola ny fidirana ho mpiasam-panjakana fa maimaimpoana ka tokony ho mailo ny rehetra, indrindra any ambanivohitra. Mangaraharaha ny fandraisana ary atao ampahibemaso ho fantatry ny fokonolona fa tena mpampianatra marina ary mendrika ny ho raisina mpiasam-panjakana ilay olona.Lava ny taom-pianarana 2018-2019 ary efa namarana izany ny ambaratonga voalohany satria rahampitso ny CEPE. Ho fankasitrahana azy ireo, nisy ny hetsika mpanabe mifety teny amin’ny kianjan’Antsahamanitra, ny faran’ny herinadro teo niaraka tamin’ny ministra mpiahy. Tanjona ny fihaonana mivantana eo amin’ny minisitra sy ny mpanabe ary ny fialana voly miaraka. Nandray anjara tamin’ny mpanabe mifety ny avy eto amin’ny Cisco Antananarivo Renivohitra, Avaradrano sy Atsimondrano ary Ambohidratrimo, hoy ny lehiben’ny Cisco eto an-dRenivohitra.Vonjy A. L’article Fandraisana mpiasam-panjakana: 1 300 ireo mpampianatra nivoaka tamin’ny ivontoeram-panofanana a été récupéré chez Newsmada.